काठमाडौंका सडकः जेब्रा छैन, क्रसिङ मात्रै!
काठमाडौं, चैत २२: दुई वर्षअघि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पैदलयात्रीहरूलाई एउटा उर्दी जारी गर्‍यो–जेब्रा क्रसिङ वा आकासे पुलबाट मात्रै बाटो काट्नू!
जथाभावी बाटो काट्ने प्रत्येक पैदलयात्रीसँग दुई सय रुपैयाँ जरिवाना असुलिने चेतावनी पनि उसले दियो। ट्राफिक प्रहरीले २०७४ बैशाख १८ गतेदेखि जथाभावी बाटो काट्ने पैदलयात्रीलाई समात्दै जरिवानाको रसिद काट्ने अभियान सुरु गर्‍यो। गोजीमा दुई सय रुपैयाँ नहुनेलाई नियन्त्रणमा लिई एक घण्टासम्म बाटोमै थुनछेक गरियो।
ट्राफिक प्रहरीको काम कानूनतः सही थियो। सडक दुर्घटना कम गराउन आवश्यक पनि थियो। तर, सडकमा पर्याप्त र प्रष्ट देखिने जेब्रा क्रसिङहरू बनाउनुको सट्टा जथाभावी बाटो काटेको भन्दै पैदलयात्रीलाई जरिवाना तिराउने र सडकमै बन्दी बनाउने कदमको सार्वजनिक सञ्जालमा चर्को विरोध भयो।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको एउटै आशय थियो–जथाभावी बाटो काट्नेलाई कारबाही गर, तर पहिले सजिलै बाटो काट्न मिल्ने जेब्रा क्रसिङहरू बनाऊ। उनीहरूले रङ उप्किइसकेको र देख्दै नदेखिने जेब्रा क्रसिङका तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालमा राखे।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको चर्को बिरोधका कारण ट्राफिक प्रहरीले जथाभावी बाटो काट्ने पैदलयात्रीलाई समात्ने अभियान स्थगित गर्‍यो। काठमाडौंका सडकमा प्रष्ट देखिने जेब्रा क्रसिङहरूको व्यवस्था गरेर मात्रै यो अभियान सुचारु गर्ने आश्वासन पनि दियो। त्यो तमासा भएको आउँदो महिना ठ्याक्कै दुई वर्ष पुग्दैछ। तर, जेब्रा क्रसिङहरूको हालत उही छ। रङ उप्किइसकेका। नजिक गई हेर्दा पनि देख्न मुश्किल पर्ने।
पैदलयात्रीले बाटो काट्ने ठाउँमा जेब्राको छालाजस्तो प्रष्ट देखिने संकेत हुनुपर्ने हो। गाडी चालकहरूले पनि परैबाट यस्ता संकेत देख्नुपर्ने हो। तर, काठमाडौंका धेरै सडकबाट जेब्राको रङ उडिसकेको छ। पैदलयात्रीहरू जथाभावी बाटो क्रस गरिरहेका छन्।जेब्राक्रस नै नदेखेपछि पैदलयात्रीहरूले जुनसुकै ठाउँबाट बाटो काट्छन्।
जेब्रा क्रसबाटै बाटो काटे पनि गाडी चालकले देख्ने होइन। जेब्रा क्रस देखे पनि बाटो रोक्नु र पैदल यात्रीलाई बाटो काट्न दिनु! छनलाई त काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय ठाउँमा जेब्रा क्रसिङ छन्। तर, नाउँमात्रैका।
Published Date: Friday, 5th April 16:01:25 PM
५० लाखभन्दा बढी मूल्यका गाडी खरिदमा रोक
एक महिनाको घरभाडा मिनाहा हुने
चार प्रदेशले पाउने भए कोरोना परीक्षण गर्ने मेसिन
सीमामा अलपत्र नेपालीलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी नेपाल आउन दिइने
वैशाख ३ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडानमा प्रतिबन्ध
चिकित्सक र सुरक्षाकर्मीलाई निःशुल्क खाना खुवाउँदै बाजेको सेकुवा
कोरोनाबारे जानकारी दिन सरकारले सञ्चालनमा ल्यायो वेबसाइट र मोबाइल एप्स
प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद् बैठक
लकडाउनमा गरिब र मजदूरलाई खानाको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने
तरकारी किन्न बिहान र साँझ पाँच घन्टा, एक मिटरको दूरी राख्नुपर्ने
एक सातामै साढे तीन लाखमा फैलियो कोरोना
चीनबाट कोरोना उपचारका आवस्यक सामाग्री आइपुग्यो
अमेरिकामा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या २ हजार नाघ्यो